Professional Eliya ဟိုတယ်ပိတ်ချော, အိမ်ပိတ်ချောထောက်ပံ့သူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Eliya ဟိုတယ်ပိတ်ချောကို 2006 ခုနှစ်မှစ. ဟိုတယ်ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွင်ထောက်ပံ့သူ။
F & B ပိတ်ချော
OEM0န်ဆောင်မှုပေးသည့်ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုသည်0ယ်သူတံဆိပ်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
supply ည့်ဝတ်ပြုအတွက် 15 နှစ်
နိုင်ငံပေါင်း 130 တွင် ပူးပေါင်း. ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားသောဟိုတယ် 5000 ကျော်သည်
Eliya China ဟိုတယ်ပိတ်ချောဟိုတယ်အိပ်ယာခင်းထုတ်လုပ်သူ
တရုတ် - Eliya မှအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဟိုတယ်ပိတ်ချောများထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်သူ
Eliya သည် 4pcs ကို piping အိပ်ယာခင်းများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်သည်
Ben Leung - အရောင်းမန်နေဂျာTel / WhatsApp / WeChat / Skype: +86 189 3398 9901အီးမေးလ်: Sales5@eliyalinen.comlemon zhang - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောင်းအားTel / WhatsApp / WeChat / Skype: +86 189 2895 1923အီးမေးလ်: Sales11@eliyalinen.comDaisy Li - နိုင်ငံတကာရောင်းအားTel / WhatsApp / WeChat / Skype: +86 180 2744 207070အီးမေးလ်: Sales18@eliyalinen.comရိုးရှင်းသောပိုက်, ကြော့စတိုင်။စိတ်ကြိုက်အရောင်များ, အမျိုးမျိုးသောလူနေမှုအတွေ့အကြုံ။လွင်ပြင်အဖြူသည်ဟိုတယ်အိပ်ယာခင်းများအတွက်အဓိကအရောင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်အချို့သောအလှဆင်ခြင်းမထည့်နိုင်သနည်းပိုက်ဒီဇိုင်းသည်ငြီးငွေ့စရာရှိသောလွင်ပြင်ဖြူအိပ်ယာခင်းကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော်လည်းဟိုတယ်များအတွက်ရိုးရှင်းသောအကြောင်းအရာကိုမစဉ်းစားနိုင်ပါ။ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များရွေးချယ်မှုများသည်သင့်အားအကြံဥာဏ်အသစ်များပေးနိုင်သည်
Royal Blue Border Design နှင့်အတူဇိမ်ခံအိပ်ယာခင်း
Ben Leung - အရောင်းမန်နေဂျာTel / WhatsApp / WeChat / Skype: +86 189 3398 9901အီးမေးလ်: Sales5@eliyalinen.comlemon zhang - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောင်းအားTel / WhatsApp / WeChat / Skype: +86 189 2895 1923အီးမေးလ်: Sales11@eliyalinin.comDaisy Li - နိုင်ငံတကာရောင်းအားTel / WhatsApp / WeChat / Skype: +86 180 2744 207070အီးမေးလ်: Sales18@eliyalinen.comborder design နှင့် border design နှင့်အတူ Eliya Montee စီးရီး, ချောချောမွေ့မွေ့ချည်ထားသောချည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဂန္ထဝင်စတိုင်လ်ကနေခေတ်မီရိုးရှင်းမှုအထိအလှဆင်ခြင်းကိစ္စမရှိပါစေအိပ်ယာခင်းသည်ဟိုတယ် guest ည့်ခန်းအတွက်ဇိမ်ကျသောဖြည့်စွက်မှုနှင့်အပြည့်အ0ဖြည့်စွက်သည်။
Ben Leung - အရောင်းမန်နေဂျာTel / WhatsApp / WeChat / Skype: +86 189 3398 9901အီးမေးလ်: Sales5@eliyalinen.comlemon zhang - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောင်းအားTel / WhatsApp / WeChat / Skype: +86 189 2895 1923အီးမေးလ်: Sales11@eliyalinen.comDaisy Li - နိုင်ငံတကာရောင်းအားTel / WhatsApp / WeChat / Skype: +86 180 2744 207070အီးမေးလ်: Sales18@eliyalinen.comသဘာဝဝါဂွမ်းမှပြုလုပ်သောကြောင့် Eliya Waffle ဘိုးဘေးသည်အသက်ရှူနိုင်ပြီးပျော့ပျောင်းသည်။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသောပန်းထိုးထားသောတံဆိပ်ကိုရင်ဘတ် / အိတ်ကပ်တွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ နှင့်၎င်း၏အလင်းရောင်အလေးချိန်ကအလွယ်တကူထုပ်ပိုးရန်လွယ်ကူစေသည်
အီးမေးလ်: Sales5@eliyalinen.comTel: 0086 189 3398 9901ပရီမီယံဝါဂွမ်းသည်ထူးခြားသောနယ်နိမိတ်နှစ်ခုရှိသောထူးခြားသောပန်းများနှင့်ထူးခြားသောပန်းထိုးပုံစံဖြင့် Eliya ပန်းကန်အိပ်ယာခင်းများကကြော့ရှင်းမှုနှင့်ရိုးရှင်းမှုသည်ဟိုတယ်အိပ်ခန်းများအားလုံးသို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်ရိုးရှင်းမှုကိုရရှိစေသည်။ ဘုရားသခင့်ညအိပ်စက်ခြင်းအတွက်ဤ duvet အဖုံးအောက်တွင်ချော်ပါ။ Eliya ဟိုတယ်အိပ်ယာခင်းခြင်းတွင်ဇိမ်ခံအိပ်ခန်းများ, စုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုသီးခြားစီရောင်းနိုင်သည်။သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ထောင်နှင့်ချီသောကွဲပြားသောချည်များနှင့်အတူပန်းထိုးခြင်းအရောင်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
လက္ကားဟိုတယ်အကောင်းဆုံးရေချိုးခန်းမျက်နှာသုတ်ပဝါကိုပေးသွင်းသူများ - Eliya ဟိုတယ်ပိတ်ဂင်
ဂန္ထဝင် 3cm အစင်းအိပ်ယာခင်း
အီးမေးလ်: Sales5@eliyalinen.comTel: 0086 189 3398 99013 စင်တီမီတာတန်အိပ်ယာခင်းသည် 300TC High Thread Count Sateen ချည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်စာရွက်ကိုပျော့ပျောင်းသောထိတွေ့မှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစွာဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဂန္ထဝင်အဖြူသည်ဟိုတယ်ခန်းတိုင်းကိုအလှဆင်ရန်သင့်တော်သည်။Set တွင် - 1 x duvet အဖုံး,2x လေးနာရီနှင့်ပြားချပ်ချပ်စာရွက် 1 ပြား။100% ဝါဂွမ်း 3cm အစင်း300 ချည်အရေအတွက် 6040soeko-tex စံသတ်မှတ်ချက် 100 အသိအမှတ်ပြု။အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများလွတ်ကင်းရန်သေချာစေရန်အရင်းအမြစ်ထည်များကိုအမြင့်ဆုံးစံဖြင့်စစ်ဆေးသည်။ အရေပြားပေါ်တွင်လုံခြုံစက်သည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသံသရာပေါ်တွင်အရောင်များနှင့်အတူအအေးဆေးကြောပါအနိမ့်ဆုံးအနိမ့်ကျလိမ့်မည်။ အရောင်ချွတ်ဆေးမသုံးရ။ အဝတ်လျှော်သောအခါ zippers ကိုပိတ်ထားပါ& ခြောက်သွေ့ခြင်းထည့်သွင်းအစုတွင်မပါဝင်ပါ
Ben Leung - အရောင်းမန်နေဂျာTel / WhatsApp / WeChat / Skype: +86 189 3398 9901အီးမေးလ်: Sales5@eliyalinen.comlemon zhang - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောင်းအားTel / WhatsApp / WeChat / Skype: +86 189 2895 1923အီးမေးလ်: Sales11@eliyalinen.comDaisy Li - နိုင်ငံတကာရောင်းအားTel / WhatsApp / WeChat / Skype: +86 180 2744 207070အီးမေးလ်: Sales18@eliyalinen.comborder design နှင့် border design နှင့်အတူ Eliya Montee စီးရီး, ချောချောမွေ့မွေ့ချည်ထားသောချည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဂန္ထဝင်စတိုင်လ်ကနေခေတ်မီရိုးရှင်းမှုအထိအလှဆင်ခြင်းကိစ္စမရှိပါစေအိပ်ယာခင်းသည်ဟိုတယ် guest ည့်ခန်းအတွက်ဇိမ်ကျသောဖြည့်စွက်မှုနှင့်အပြည့်အ0ဖြည့်စွက်သည်။
တူရကီ 100% ဝါဂွမ်းဖြူ5Star Hotel White Buch White Publel ကိုလိုဂို E1 နှင့်အတူ
အီးမေးလ်: Sales5@eliyalinen.comTel: 0086-18933989901လက်သုတ်ပုဝါထုတ်လုပ်မှုကို 15 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံဖြင့် Eliya သည်အရွယ်အစား / အရောင် / လိုဂို / ဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Eliya လက်သုတ်ပုဝါများသည် Dobby Border, Yarn မှဆိုးကျိုးများ, Jacquard နှင့်ပန်းဘွမ်းကွင်းခြင်း, 32 မျိုး, ပထမ ဦး ဆုံးအတန်းအစား 100% စင်ကြယ်သောသဘာဝဝါဂွမ်းနှင့်အတူ ecomatic Amine နှင့်ချောင်းနှင့်ချောင်းနှင့်အတူဂေဟစနစ်ကိုဆေးကုသမှုခံယူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်သုတ်ပုဝါသည်သင့်အားကျန်းမာသောဘဝကို ဦး ဆောင်လိမ့်မည်။ Supereme Long Pie Terry Loop နှင့်အတူကြယ်ပွင့်5stars ဟိုတယ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်မားပြီး, လက်သုတ်ပဝါတစ်ခုလုံးကိုပိုမိုအဆင်ပြေစေသည်
အရည်အသွေးမြင့်မားသော guest ည့်သည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ set ကိုလက်ကားရောင်းအား - Shangri-La စီးရီး
ထုတ်ကုန်နိဒါန်းရှမ်နာရွှေနှင့်ကော်ဖီအညိုရောင်အရောအနှောဒီဇိုင်းနှင့်အတူဟိုတယ်အများစုသည်ဤပုံစံကို၎င်းတို့၏အလှဆင်ပစ္စည်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်ဤပုံစံကိုသုံးနိုင်သည်။ Eliya Designers များသည်အသိဉာဏ်ရှိသောဒီဇိုင်း, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအယူအဆ, ဟိုတယ်များအားလုံးဟိုတယ်များကိုအသုံးပြုသည်။အရောင်းအ0ယ်* အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပ်ချုပ်နည်းစေ့, စိတ်ကြိုက်လိုပါက logo ambosed technique ကို* နှစ်ပေါင်း 30 ကျော်အတွေ့အကြုံရှိဒီဇိုင်နာအဖွဲ့နှင့်အတူသင့်အတွက်အထူးဝန်ဆောင်မှု
Eliya ဟိုတယ်များသည်လက်ကား0န်ဆောင်မှုပေးသည်
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောဈေးကွက်တွင်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုအပြည့်အ0ကိုအပြည့်အဝကျေနပ်မှုရရန်အလုံးစုံကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှင့်ခြွင်းချက်ဆိုင်ရာအပ်နှံခြင်းကိုသက်သာစေသည်။
↠ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ကြိုးပမ်းမှုများအားလုံးနှင့်အတူ Eliya ဟိုတယ်ပိတ်ပုဆစ်ပေးသွင်းသူများသည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ကောင်းမွန်သော0န်ဆောင်မှုများအတွက်သက်သေပြမှုမှတ်တမ်းများကိုရရှိခဲ့ပြီးသက်သေပြနိုင်ခဲ့သည်။ ပြည်ပတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောငြူစူသောဂုဏ်သတင်းအပြင်လက်ရှိတွင် Eliya သည်ဟိုတယ်ပိတ်ချောထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏အဓိကအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်မည်သည့်အကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်လိုအပ်ပါက။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အကူအညီပေးရန်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှကြားနာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ပျမ်းမျှခဲအချိန် 20 (s)
OEM0န်ဆောင်မှုတွင်ဒီဇိုင်း0န်ဆောင်မှုပေးသည့်ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိဟိုတယ်လုပ်ငန်းသို့ iso9001 အရည်အသွေးအာမခံပိတ်ချောများကိုထောက်ပံ့ရန်အထူးပြုသည်
လူ5ဦး ထက်နည်းသည်&ကုမ္ပဏီတွင် D အင်ဂျင်နီယာ (များ)
အကောင်းဆုံးဟိုတယ် lilnen မှအပ်နှံ
နိုင်ငံပေါင်း 130 တွင် ပူးပေါင်း. ဟိုတယ်ပေါင်း 5000 ကျော်သည် ပူးပေါင်း. ဟိုတယ်များ,
တရုတ် ality ည့်ဝတ်ပြုမှုအသင်းအတွက် VP စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။
ထက်ပိုပြီး 15 နှစ်များထက်ပိုပြီးဟိုတယ်ထောက်ပံ့ရေးအတွက်နှစ်များအတွေ့အကြုံ 5000 ဇိမ်ခံဟိုတယ်များနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ, Boutique ဟိုတယ်များစသည်တို့ပါဝင်သည် 150 နိုင်ငံများ
Eliya ဟိုတယ်ပိတ်မိ။ Co. , Ltd, ltd ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်ပိတ်ဂင်ပေးသွင်း မူလတန်းအမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်သည့်အဆင့်မြင့်ဟိုတယ်ပိတ်ချောများကိုထောက်ပံ့ခြင်း "Eliya" နှင့် "ပိတ်ချောလိုလားသူ" ။ Guangzhou, Panyu ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။ Eliya သည် 2006 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးဟိုတယ်တွင် hotel ည့်ခန်းမနှင့်စားသောက်ခန်းနှင့်စားသောက်ခန်းနှင့်စားသောက်ခန်းနှင့်စားသောက်ဆိုင်များကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လက္လန်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်လက္လ်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းတို့တွင်ပါဝင်သည်။ Eliya ကိုတည်ထောင်သူ Eliya တည်ထောင်သူများသည်သူတို့၏ဗဟုသုတနှင့်အယူအဆ၏ဗဟုသုတများနှင့်အယူအဆ၏သဘောတရားများကို ality ည့်ဝတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခြင်း, ယခုတွင် Eliya သည်ဟိုတယ်ပိတ်ပင်စက်မှုလုပ်ငန်းရှိအဓိကအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပေးသွင်းသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Professional Luxury Hotel Bead အိပ်ယာခင်းများချည်နှောင်ခြင်း - Eliya Hotel Linen Co. , Ltd. ထုတ်လုပ်သူများ
Eliya Professional Luxury Hotel Hotel Bed အိပ်ယာခင်း - Eliya Hotel Linen Co. , Ltd. ထုတ်လုပ်သူများ - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု - အမေရိကန်ဖောက်သည်များ၏အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏0န်ဆောင်မှုသည်ပြည့်စုံသည် - ကန ဦး အတိုင်ပင်ခံမှအပြီးသတ်ရောင်းချမှုသို့ ဦး တည်ခြင်းမှဖြစ်သည်။
Eliya တွင်ပန်းထိုးပုဝါမည်သို့ထုတ်လုပ်နိုင်မည်နည်း။ကုန်ကြမ်းကိုရွေးချယ်ခြင်းမှ Eliya သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောသဘာဝဝါဂွမ်းနှင့်ရေဂန်နင်နူကွက်ဆေးဆိုးခြင်းကိုရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်သည်။နှစ်ပေါင်း 30 ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ Eliya Designers Team သည်0န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားရည်ညွှန်းရန်အပြင်အဆင်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိအလုပ်သမားများနှင့်တိုးတက်မှုသည်ဤအရာအားလုံးကိုမြင့်မားစေလိမ့်မည်။ ဗွီဒီယိုကိုစစ်ဆေးကြည့်ရအောင်။
Eliya Professional Live Way အဖွဲ့
Eliya Professional Live Way အဖွဲ့Mr. Ben Leung & Ms. Leong Zhang & Ms. Daisy Li တို့သည်တိုက်ရိုက် streamer လက်မှတ်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။အလွန်ကောင်းမွန်သောပါးစပ်အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဟိုတယ်ပစ္စည်းများဗဟုသုတနှင့်အတူ Live Show Team သည် Eliya ထုတ်ကုန်များနှင့်စက်ရုံနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြလိမ့်မည်။လွန်ခဲ့သော6လအတွင်းတွင်ပြပွဲ 110 ကျော်ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ပို့ပေးပါပြီ, နောက်တစ်ကြိမ် Live Show သို့ဖိတ်ကြားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့0မ်းသာပါသည်။သင့်တွင်နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါက Pls သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့လိုက်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျခိုင်မာသည့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံနှုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံမှထုတ်ကုန်တိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းတောင်းဆိုသည့်အရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်အညီသေချာစေသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောစျေးကွက်တွင်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကိုအပြည့်အဝကျေနပ်မှုရရန်အပြည့်အ0ကြိုးစားနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ကြိုးပမ်းမှုများအားလုံးနှင့်အတူ Eliya သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ကောင်းမွန်သော0န်ဆောင်မှုများအတွက်သက်သေပြမှုမှတ်တမ်းများကိုရရှိခဲ့သည်။ပြည်ပတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောငြူစူသောဂုဏ်သတင်းအပြင်လက်ရှိတွင် Eliya သည်ဟိုတယ်ပိတ်ချောထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများတွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏အဓိကအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ် ality ည့်ဝတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်း၏ဒုတိယဥက္က president ္ဌလုပ်ငန်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သည့်ဂုဏ်ထူးဆောင်ခြင်း။ Sino-Africe Hotel တွင် Sifted Computies Indesporting Industry Trade Forwlease သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် site ကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
Tel: + 86-020 3910 2888
အီးမေးလ် - info8@eliyalinin.com
Add: B16, Huachuang Technology စက်မှုဥယျာဉ်, ဂျင်ရှန်ကျေးရွာ, ဂွမ်ဇူးခရိုင်,